फिल्मी चमकदमकभित्र श्वेताको श्वामश्वेत जीवन - विवेचना
March 6, 2018 387 Views
विष-वाण जस्तै यस्ता आरोपहरु सुनेर उनी निशब्द हुन्छिन् । उनको आँखा पग्लिन्छ । आँशु बग्छ ।
तर, बुवा बिटि्रश आर्मी । आफन्तहरु कोही आर्मीको मेजर, कोही डिआइजी । श्वेतालाई लाग्थ्यो, आर्मी वा पुलिस बनौं ।
आर्मी/पुलिस बन्नकै लागि उनी हेभिङ, सेटअप गर्न थालिन् । दौडन थालिन् । फुपु मिथिला शर्माले भनिन्, ‘फिटनेसको लागि किन दशथरी गर्नुपर्‍यो, डान्स गर न ।’ मिथिलाको सिफारिसमा नृत्य निर्देशक बसन्त श्रेष्ठको इन्स्िटच्युटमा भर्ना पनि भइन् । नाच सिक्न थालिन् ।
घरमा सत्यनारणको पूजा थियो । उनी घरमै बसेकी थिइन् । बसन्त श्रेष्ठको डान्स इन्स्टिच्युटबाट फोन आयो । ‘एकछिन काम छ’ भनेर । सुरुमा उनले आनाकानी गरिन् । तर, उताबाट ‘भेट्नैपर्ने’ भनेपछि हस्याङफस्याङ गर्दै श्वेता डान्स इन्स्टिच्युट पुगिन् ।
जमाना अहिलेजस्तो थिएन । हिरो-हिरोइनलाई पर्दामा मात्र देखिन्थ्यो । भेट्नै गाह्रो । आफुले सिनेमामा देखेको अनुहारसँग हठात साक्षात्कार हुँदा श्वेता स्तब्ध भइन् । नर्भस भइन् ।
उनीहरु नयाँ फिल्म बनाउने योजनामा रहेछन्, ‘कहाँ भेटिएला ।’ फिल्मको लागि ‘आर्यन फेस’ कि केटी चाहिएको रहेछ । श्वेतासँग उनीहरुको सवाल-जवाफ भयो ।
उनी घर पुगिन् । फिल्म खेल्ने/नखेल्ने टुंगो थिएन । तर, उनले आफुलाई फिल्मको अफर आएको बताइदिइन् । कसैले पत्याए पो !
तर, केही दिनपछि उनको घरमा आइपुग्यो श्रीकृष्ण श्रेष्ठसहितको टोली । तर, घरबाट मञ्जुरी थिएन । घरपरिवारले भन्थे, ‘फिल्ममा लागियो भने बिहे हुँदैन ।’ छोरीलाई उनीहरु त सेकेन्ड लेफि्टनेन्ट बनाउन चाहन्थे । बिहे गरिदिन चाहन्थे ।
फिल्मको मूर्हतमा पहिलो सट नै श्वेताबाट लिइयो । अघिल्तिर निरुता सिंह थिइन् । श्रीकृष्ण श्रेष्ठ थिए । हरिवंश आचार्य थिए । सबैको अगाडि उभिएर सट कसरी दिने ?
मुड नै नचल्ने । भाव नै आउँदैन । पटक-पटक टेक लिँदा पनि चित्तबुझ्दो नहुने । ठीक त्यहीबेला घरबाट फोन आयो । उनले उठाइन् । निर्देशक रिसाएर हप्काइदिए ।
रुखमा अडेसिएर रुनुपर्ने । स्कुलका भुराभुरी सुटिङ हेर्न भिड लागेका छन् । पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि उनले निर्देशकको चित्त बुझाउन सकिनन् । १४ टेक खाइसकिन् ।
६ दिन यसरी नै गुजि्रयो । उनलाई लाग्यो, ‘कहाँ आएर म फसें ?’
आखिरमा उनले भाग्ने मनस्थिती बनाइन् । दिदी (सरिता)लाई भनिन्, ‘मलाई यहाँबाट भगाएर लानु न । म यहाँ काम गर्न सक्दिनँ ।’ पछि सबैलाई थाहा भयो, श्वेताको मनोदशा । त्यसपछि भने उनलाई फकाई फुल्याई गरियो ।
श्वेताले सुटिङमा भएका अप्ठ्याराहरु अक्सर सुशीला रायमाझीलाई पोख्थिन् । उनले श्वेतालाई सम्झाई-बुझाई गर्थिन् । श्रीकृष्णले पनि बेलाबखत सम्झाउँथे, ‘तिमी फिल नै गर्दिनौ । क्यारेक्टरमा भिज्ने प्रयास नै गर्दैनौं । प्रयास गर, केही पनि गाह्रो हुँदैन ।’
तर, फिल्मीवृत्तमा यस्ता कुराहरु पचाउनुपर्छ भनेर उनै श्रीकृष्णले उनलाई बुझाइदिए । श्रीकृष्ण भन्थे, ‘फिल्मी क्षेत्रमा आएपछि यस्ता अनेको उल्झन झेल्नुपर्छ । सहनुपर्छ । कसले के भन्छ, कसले के, सबैको जवाफ दिएर पनि सकिदैन ।’
फिल्म रिलिजको क्रममा दर्जनौं ठाउँमा श्रीकृष्ण र श्वेता साथसाथ भए । देश-विदेशमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा दुबै सम्मिलित भए । उनीहरुले व्यवसायमा सहकार्य गर्न थाले । फिल्म ‘कोहिनुर’मा लगानी साझेदार गर्ने क्रमसँगै श्रीकृष्ण र श्वेता थप घनिष्ठ भए ।
‘हामी सँगै हिँड्थ्यौं, एकअर्कालाई साथ दिन्थ्यौं’ श्वेता सम्झिन्छन्, ‘तर, बिहेको कुरा भने दुबैले सोचेका थिएनौं । एक प्रतिशत पनि ।’
‘कोहिनुर’ छायांकनको क्रमदेखि नै श्रीकृष्ण श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो । एकोहोरा सुख्खा खोकी लाग्ने ।
फिल्ममा श्रीकृष्ण र श्वेताको केमेस्ट्री रुचाइएकै थियो । तर, उनीहरुबीच उमेर-अन्तर र जातिय असमानता थियो । आखिर जे भए पनि दुबैको परिवार श्रीकृष्ण र श्वेताको बिवाहमा मञ्जुर थिए । यता श्रीकृष्णको स्वास्थ्य भने झन्-झन् बिग्रियो । बिहेको मिति तय भएको सातादिन अघिसम्म श्रीकृष्ण अस्पताल धाइरहेका थिए । बिहेको सबै बन्दोबस्ती भने श्वेताले मिलाइरहेकी थिइन् ।
बिहेको पहिलो रात दुबै अलग-अलग सुते ।
अर्कोदिन श्रीकृष्णलाई धामीझांक्री गराइयो । औषधि उपचार गराइयो । तर, उनी तङगि्रनै सकेनन् । झन्-झन् गल्दै गए । श्रीकृष्णलाई भेट्न आफन्तहरु आइपुगे । श्रीकृष्णले श्वेतासँग भने, ‘सरी, म तिम्रो खुसीमा सामेल हुन सकिनँ ।’
श्रीकृष्ण आफ्ना फ्यानहरुलाई निराश तुल्याउन चाहँदैनथे । त्यसैले आफ्नो रोगलाई उनी आफंैभित्र दबाउने चेष्टामा थिए । अस्पतालमा उनले आफ्नो सक्कली नाम खुलाएनन् । अर्कैै नाममा भर्ना भए ।
फिल्म रिलिजको प्रेसर बढ्दै थियो । बधाई र शुभकामनाको ओइरो लाग्थ्यो । कोही डिनरको अफर गर्थे । उनीहरु सबैलाई श्वेता रुँदै म्यासेज फर्काउथिन् । तर, उनी कहिल्यै खुलाउँथिनन्, कति कष्टसाथ अस्पतालका चिसा रातहरु गुजि्रँदैछ भनेर ।
श्वेताको पग्लिहाल्ने मन छ । त्यही मन हो, जसले पत्थर जस्तो कठोर परिवेश र परिस्थिती पनि पचाउनु परेको छ
तर, २१ दिनपछि श्रीकृष्णको हालत यति खराब भयो कि, सम्हाल्नै नसिकने । श्वेता चाहन्थिन्, संसारको जुनसुकै ठाउँमा लगेर भएपनि आफ्ना पतिलाई सकुशल बनाउने । तर, उनको इच्चा मात्र सर्वोपरी थिएन ।
श्रीकृष्णले पत्याए/पत्याएनन्, भगवान जानोस् । यति भने, ‘दर्शकहरु निराश होलान् । हाम्रो सन्देश पठाइदेउ । भ्वाइस डबिङ गरेर भए पनि ।’
श्वेताले त्यसै गरिन् । भ्वाइस डबिङ गरेर उनीहरुले दर्शकलाई भने, ‘हामी उपचारमा छौं । निको भएर छिटै र्फकन्छौं ।’
श्वेता भित्र पसिन् । त्यहाँको दृश्य सहने शक्ति थिएन श्वेतासँग । श्रीकृष्णको निर्जिव शरीरलाई उनी नाङ्गो आँखाले हर्ने सक्दैनथिइन् ।
अमेरिकामा बसेर उनले लामो समय उपचार गराइन् । अष्ट्रेलियामा उपचार गराइन् । त्यसबेलाको दिनहरु उनी वयान गर्न सक्दैनन् ।
त्यही घटनाले श्वेताको जीवनमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ । उनी आफै रोगको शिकार भइन् । उनका बुवाले त्यही बेलादेखि निन्द्राको औषधी खानुपर्ने भएको छ । श्रीकृष्ण बितेपछि श्वेताको बुवाआमाले पुरानो घर बिक्री गरे । श्वेताको सबै सामानहरु त्यही छाडेर नयाँ घरमा सारियो । जहाँ श्वेताको रुमानी सपनाहरु बिजारोपण भएको थियो, त्यो घर पनि अब उनको रहेन । एउटा दुखान्तसँगै ती सबै कुरालाई जबरजस्ती भुल्नु परेको छ, ताकि फेरी-फेरी पुरानो यादहरुले नसतायोस् ।
तैपनि, श्वेताले ‘कान्छी’ बनाइन्, आफ्नै जीवन-भोगाईका कथा मिसाएर । फिल्मको शीर्षपात्र ‘कान्छी’को संघर्ष र वाध्यता श्वेताका आफ्नै भोगाइ हुन् । श्वेता यसै भन्छिन् । उनी के पनि भन्छिन् भने, ‘मेरो जीवन नै आखिर दुखान्त छ भने, फिल्ममा किन ट्रेजिडी नबनाउने ?
जसोतसो श्वेता तङ्गि्रइन् । उनी बाँच्न चाहन्छिन् । हाँस्न चाहन्छिन् । वितेका पीडाहरु बिसाउन चाहन्छिन् ।
रमाइलो माहौलमा मिसिन खोज्छिन् । साथीभाईसँग घुलमिल हुन खोज्छिन् । नाच्ने, गाउने गर्छिन् । हुक्का तान्छिन्, वाइन पिउँछिन् । मानिसहरु भन्छन्, अब नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्छ । रोएर होइन, हाँसेर बाच्नुपर्छ ।
तर, उनको हाँसो र खुसीमा परिस्थिती कति कञ्जुस्याइँ गर्छ । उनीमाथि खानतलासी लिइन्छ । बचन लगाइन्छ । बात लगाइन्छ । फेरि उनलाई डाँको छाडेर रुन मन लाग्छ । गाडीमा बस्छिन् । चर्को ध्वनीमा गीत बजाउँछिन् । र, मन पखालिने गरी रुन्छिन् ।
Previous पद्ममायालाई ६ लाख दिन सर्वोच्चको आदेश
Next किसान र गोठालाबीच झडप हुँदा १० को मृत्यु
August 16, 2017 41,403